လေဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သိနိုင်တဲ့အချက်များ နှင့် ကာကွယ်နည်းများ
HomeHealthလေဖြတ်တော့မယ်ဆိုတာ ကြိုတင်သိနိုင်တဲ့အချက်များ နှင့် ကာကွယ်နည်းများ
လေဖြတ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးတွေကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ?
ထိုအခါပိတ်ဆို့သွားသောသွေးကြောနေရာရှိ ဦးနှောက်တစ်ရှူးမှာ တဖြည်းဖြည်းဖောင်းလာပြီး ဦးခေါင်းခွံအတွင်းတွင် ပိုမိုနေရာယူလာရာမှ ဦးနှောက်အတွင်းသားဖိအားမြင့်တက်လာပါတယ်။ထိုအခါ
အလွန်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ဦးနောက်တစ်ခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယ်။ လေဖြတ်စဉ်မှာ ထိုလူရဲ့ ခြေ လက်များ လှူပ်မရနိုင်သလို သူ့ရဲ့စကားပြောအာရုံနဲ့
အကြားအာရုံတွေပါအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။တစ်ချိူ့သောလေဖြတ်ခြင်းတွေမှာဆို လူနာအနေနဲ့ ထင်ယောင်ထငိမှားတွေပါဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
– မျက်နှာ သို့ ခြေ လက်များ ရုတ်တရက်ထုံခြင်း၊အားနည်းခြင်း (များသောအားဖြင့် ကိုယ်တခြမ်းတည်း)
– စကားမပြောနိုင်တော့ခြင်း သို့ ပြောသည်ကိုနားမလည်ခြင်း
– -ရုတ်တရက် အလွန်အမင်းခေါင်းကိုက်ခြင်း
-သူ့ကို ပြုံးခိုင်းပါ။မျက်နှာ တစ်ခြမ်းရွဲ့မရွဲ့ကို အကဲခတ်ပါ။
-စာတစ်ကြောင်း ကိုထပ်ခါထပ်ခါရွတ်ခိုင်းပါ။စာလုံးများ ပီသမှန်ကန်မှု ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
လေဖြတ်သည်ဟု သံသယရှိပါက ချက်ချင်းဆေးရုံပို့ရပါမည်။လေဖြတ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိူးများကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ပထမ၁နာရီအတွင်း ပို့နိုင်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Credit – Dr Jue (Daily Hot News)
လဖွေတျခွငျးရဲ့ နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိူးတှကေို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ?
ထိုအခါပိတျဆို့သှားသောသှေးကွောနရောရှိ ဦးနှောကျတဈရှူးမှာ တဖွညျးဖွညျးဖောငျးလာပွီး ဦးခေါငျးခှံအတှငျးတှငျ ပိုမိုနရောယူလာရာမှ ဦးနှောကျအတှငျးသားဖိအားမွငျ့တကျလာပါတယျ။ထိုအခါ
အလှနျခေါငျးကိုကျခွငျးဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ထို့နောကျမှာတော့ဦးနောကျတဈခုလုံးမှာဖိအားကိုခံစားလာရပါတယျ။ လဖွေတျစဉျမှာ ထိုလူရဲ့ ခွေ လကျမြား လှူပျမရနိုငျသလို သူ့ရဲ့စကားပွောအာရုံနဲ့
အကွားအာရုံတှပေါအလုပျမလုပျနိုငျတော့ပါဘူး။တဈခြိူ့သောလဖွေတျခွငျးတှမှောဆို လူနာအနနေဲ့ ထငျယောငျထငိမှားတှပေါဖွဈလာတတျပါတယျ။
– -ရုတျတရကျ အလှနျအမငျးခေါငျးကိုကျခွငျး
-စာတဈကွောငျး ကိုထပျခါထပျခါရှတျခိုငျးပါ။စာလုံးမြား ပီသမှနျကနျမှု ရှိမရှိစဈဆေးပါ။
လဖွေတျသညျဟု သံသယရှိပါက ခကျြခငျြးဆေးရုံပို့ရပါမညျ။လဖွေတျခွငျးရဲ့နောကျဆကျတှဲဆိုးကြိူးမြားကို ကာကှယျဖို့အတှကျ ပထမ၁နာရီအတှငျး ပို့နိုငျပါက အကောငျးဆုံးဖွဈသညျ။